ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေထဲက အူကြောင်ကြောင်အနိုင်ဆုံး CGI ပြင်ဆင်ချက် ၅ ခု - MoviesFan
ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေထဲက အူကြောင်ကြောင်အနိုင်ဆုံး CGI ပြင်ဆင်ချက် ၅ ခု
CGI ဖန်တီးချက်တွေကတော့ ဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းနီးပါးမှာလိုလို လှိုင်လှိုင်ကြီးကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Superhero ဇာတ်ကားတွေရဲ့ Behind the Scenes တွေသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် ဇာတ်ဝင်ခန်းတော်တော်များများကို Green Screen တွေရှေ့မှာပဲ Motion Capture သုံးပြီးရိုက်ထားကြတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။ Transformers နဲ့ Pacific Rim တို့လို့ဇာတ်ကားတွေက စက်ရုပ်တွေ၊ အကောင်တွေကို CGI နဲ့ဖန်တီးတာက သိပ်မဆန်းလှပေမယ့် တစ်ချို့ဇာတ်ကားတွေရဲ့ post prodution မှာ CGI အသုံးပြုပြီး ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခန်းတွေဟာ တကယ့်ကိုအခွီတစ်လိုင်းပါပဲ။ Blockbuster ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အင်မတန်မှ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ CGI ပြကွက်တွေရှိပေမယ့်လည်း ဒီဆောင်းပါးမှာ အူကြောင်ကြောင်နိုင်လှတဲ့ CGI ပြင်ဆင်ချက်တွေကိုပဲ စုစည်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1. Justice League ထဲက Superman ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေး
ဒီကိစ္စကတော့ ဖြစ်ပျက်သွားတာသိပ်မကြာသေးဘူးဆိုတော့ လူသိများတဲ့ကိစ္စလေးပါ။ Justice League ထဲက Superman ရဲ့ ပုံစံမကျတဲ့ ပါးစပ်အနေအထားဟာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်စရာ၊ ဟာသလုပ်စရာကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ Superman နေရာမှာသရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသားကြီး Henry Cavill ရဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေးကို post-production ရောက်မှ CGI အသုံးပြုပြီး ဖယ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Justice League ဇာတ်ကားရဲ့ reshoot တွေပြုလုပ်ချိန်မှာ ဒါရိုက်တာက Superman အခန်းတွေထပ်ထည့်ချင်၊ Henry Cavill ကလည်း Mission Impossible6နဲ့စာချုပ်အရ နှုတ်ခမ်းမွှေးရိတ်လို့မရ.. အဲလိုနဲ့ပဲ အပိုထပ်ထည့်မယ့်အခန်းတွေအားလုံးကို နှုတ်ခမ်းမွှေးကြီးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ post-production ရောက်မှ Superman ပါတဲ့အခန်းတိုင်းမှာ CGI အသုံးပြုပြီး နှုတ်ခမ်းမွှေးတွေကို လိုက်ဖျောက်ခဲ့ရပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းမွေးကိုဖျောက်ဖို့ ဘယ်လောက်သုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို အတိအကျထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီ reshoot တစ်ခုလုံးကတော့ Warner Bros ကို ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ကုန်ကျစေခဲ့ပါတယ်။ “Henry Cavill’s Moustache/Superman’s Moustache” ဆိုတာကတော့ တကယ့် Meme အကြီးစားကြီးတစ်ခုကို ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။
Henry Cavill@ Mission Impossible 6
2. Call me By Your Name ဇာတ်ကားထဲက Armie Hammer ရဲ့ ရွှေဥ
ဒီတစ်ခုကတော့ နည်းနည်းကြမ်းပါတယ်။ အော်စကာဆုရရှိထားတဲ့ Call me By Your Name ဇာတ်ကားထဲက အဓိကဇာတ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Armie Hammer ရဲ့ ရွှေဥတွေဟာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာတုန်းက အပြင်ထွက်ပြီး လေကောင်းလေသန့်ရှူကြလို့ post-production မှာ CGI သုံးပြီး ဖျောက်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့ (တစ်ကြိမ်တည်းမဟုတ်ပါဘူး… ခဏခဏပါပဲတဲ့)။ Armie Hammer က ဇာတ်ကားထဲမှာ တော်တော်ကိုတိုတဲ့ ဘောင်းဘီတွေဝတ်ဆင်ခဲ့ရသလို သူ့ရဲ့ရွှေဥတွေကလည်း ဖွံ့ထွားလွန်းလို့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။ Hammer ကတော့ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ “ဘောင်းဘီက တိုလွန်းတာကိုး.. ဘယ်တတ်နိုင်မလဲဗျ” ဆိုပြီး ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။
3. Fifty Shades of Grey ထဲက မင်းသမီး Dakota Johnson ရဲ့ Pubic Hair
Fifty Shades ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ အဓိကမင်းသမီး Dakota Johnson ကို မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာ တကိုယ်လုံးပေါ်တဲ့အခန်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအခန်းတွေမှာ မြင်ခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့ Pubic Hair တွေဟာ အတုတွေပါတဲ့။ ရိုက်ကူးစဉ်တုန်းက အကာအကွယ်ဝတ်ပြီးရိုက်ခဲ့ကာ post-production မှာကျမှ သဘာဝကျအောင် ကွန်ပြူတာအထူးပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ ဖန်တီးထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး.. သူမရဲ့တင်ပါးကို အနီးကပ်ရိုက်ပြတဲ့အကွက်တွေမှာလည်း လူစားထိုးပြီး သရုပ်ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အဲ့တော့ ဇာတ်ကားထဲမှာမြင်ခဲ့ရသမျှ အင် တွေလို့သာမှတ်ပါလေ။
4. John Wick ဇာတ်ကားထဲက ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ တန် ခွေးချီး
ပထမ John Wick ဇာတ်ကားထဲက ခွေးချီးပုံကို CGI သုံးပြီးဖန်တီးခဲ့တာ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ခန့်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်တဲ့။ အကြောင်းရင်းကတော့ ခွေးကိုဝမ်းနှုတ်ဆေးတိုက်ခွင့်မပေးလို့ပါတဲ့။ အဲဒါနဲ့ပဲ မြက်ခင်းအလွတ်ကြီးကိုရိုက်ပြ၊ post-production ကျမှ CGI တွေနဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ကဲ.. ကိုယ့်ဆီမှာ John Wick ဇာတ်ကား အရံသင့်လေးရှိနေရင် သေချာကြည့်လိုက်ကြပါဦး အဲဒီ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ တန် ခွေးအင်အင်းလေးကို။
5. Blade Trinity ရိုက်ကူးနေတုန်း မျက်လုံးဖွင့်ဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ ပြီးမှ CGI နဲ့ မျက်လုံးတွေပြန်ထည့်ခဲ့ရတဲ့ Wesley Snipes
တတိယမြောက် Blade ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခဲ့စဉ်က Blade မင်းသားကြီး Wesley Snipes က ရိုက်ကွင်းကလူတွေနဲ့ တောက်လျှောက်လိုလိုကို ရန်တွေဖြစ်၊ စိတ်တွေကောက်နေခဲ့တာပါ။ ရိုက်ကွင်းကိုမလာ၊ သူ့ကားထဲမှာပဲထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်း၊ ဒါရိုက်တာနဲ့ရန်ဖြစ်… Snipes တစ်ယောက် သောင်းကျန်းခဲ့တာတော့ အစုံပါပဲ။ ဘယ်လောက်ထိတောင်လဲဆို သူ့ရဲ့မျက်နှာအနီးရိုက်ချက်တွေကလွဲပြီး ကျန်တာတွေကို လူစားထိုးနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့အထိပါပဲ။ အခုဒီကိစ္စကလည်း သူသောင်းကျန်းခဲ့တာတွေထဲကတစ်ခုပါ။ အဲဒီအခန်းကိုရိုက်ကူးစဉ်တုန်းက Snipes က သူ့မျက်စိကို လုံးဝမဖွင့်ခဲ့ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှလည်း ပြောလို့မရတဲ့အဆုံး သူ့မျက်လုံးပိတ်ရက်သားအတိုင်းရိုက်ကူးပြီး post-production ကျမှ CGI နဲ့ မျက်လုံးဖွင့်ခိုင်းရပါတော့တယ်။ အောက်ကဗီဒီယိုမှာသာ သွားကြည့်လိုက်ပါတော့.. ၃:၂၂ မိနစ်အမှတ်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Post: ရုံတင်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ X-Men ရုပ်ရှင်ကားသစ်နှစ်ကား
Next Post: မင်းသမီး ဂျုန်ဆူး (Choi Ji Woo) ရဲ့ မင်္ဂလာ သတင်း😱